IiNkqubo zeSelfowuni: Kubaluleke kangakanani ukuCwangcisa, ukuKhusela kunye nokuVavanya? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 9, 2015 NgoLwesihlanu, Oktobha 9, 2015 Douglas Karr
Kukho indleko ezithile ekusebenzeni nazo isicelo sesiko esiqhelekileyo ababhekisi phambili kwinqanaba lokucwangcisa kunye neprototyping. Ixesha elichithwe ekuqinisekiseni ukuba amava omsebenzisi alungile kubalulekile kwimpumelelo yokwamkelwa kunye nokusetyenziswa kwesicelo sakho esiphathwayo, nangona kunjalo. Kodwa ngama-52% kuphela asebenzisa inkqubo yovavanyo kwizicelo zabo eziphathwayo ngokwengxelo evela kwiAccenture!
[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] Sebenzisa ikhonkco lethu lokudibana kunye nyuka uye kuma-30% kwiProto.io yakho Umrhumo wonyaka! Yenza ukuthembeka okuphezulu kunxibelelwano olusebenzisekayo lwesoftware kwimizuzu ebonakala ngebhrawuza okanye isixhobo esiphathwayo. [/ Ibhokisi]
Ingxelo ibonisa ukuba phantse isiqingatha sabo bonke abaphathi Bavakalelwa kukuba amava abo esicelo esiphathwayo akalunganga. Yhu! Hlanganisa oko kunye nokuziphatha komsebenzisi kwaye unengxaki enkulu. I-TechCrunch yabelana ngezibalo kuphela I-79% yabasebenzisi abaselfowuni bazakuzama usetyenziso okwesibini ukuba abanamava alungileyo omsebenzisi, kwaye oko kwehla kuye kwi-16% yabasebenzisi abazama okwesibini. Olu luvo lokuba eyakho abasebenzisi baya kuba ngabavavanyi bakho yinto eyintlekele enikiweyo yokuba baya kunikezela ngaphandle kokuqhubeka nokusebenza kunye nohlaziyo.
Iipesenti ezingama-56 zeenkokheli eziphathwayo ezivavanyiweyo zithi kuthatha iinyanga ezisi-7 ukuya ngaphezulu konyaka omnye ukwakha iapp enye kwaye iipesenti ezili-1 bathi bachitha kwi- $ 18 ukuya ngaphezulu kwe- $ 500,000 nge-app nganye. Iipesenti ezingama-1,000,000 zee-CIOs zicinga ukuba inkqubo ithatha ixesha elide kakhulu; Iipesenti ezingama-50 ziyicaphula njengomthombo woxinzelelo. Umthombo: IKinvey.
Yindleko enkulu kwiinkampani ezingaboniyo buyela kutyalo-mali lwesoftware.
tags: Accentureidigital yedijithaliUsetyenziso lweshishiniImfuno ye-mobiel appIindleko zesicelo se-mobielIindleko zesoftwareInkqubo yeselfowuniInkqubo yeselfowni yokubonisauvavanyo mobileiproto.io
Sep 8, 2017 kwi-3: 48 AM
Ithetha ukuthini lento?
Ixesha elichithwe ukuqinisekisa ukuba amava omsebenzisi afanelekile kubalulekile kwimpumelelo yokwamkelwa kunye nokusetyenziswa kwesicelo sakho esiphathwayo, nangona. "
Juni 14, 2018 ngo-1: 14 AM
Oko kuthetha ukuba utyalomali olubalulekileyo kumava omsebenzisi lubalulekile xa usenza usetyenziso lweselfowuni. Ukuba ubeka yonke inkxaso-mali yakho kuphuhliso lweapp, kodwa kunzima ukuyisebenzisa, uza kuchitha ixesha elininzi kunye nemali. Ukongeza, ukuzama ukuthetha nabaphulaphuli bakho ukuzama isicelo sakho okwesibini kunzima kakhulu.